साफ च्याम्पियनसिप : इतिहास कोर्ने दाउमा नेपाल - Dainik Online Dainik Online
साफ च्याम्पियनसिप : इतिहास कोर्ने दाउमा नेपाल
प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०७८, शनिबार ८ : २३
काठमाडौं । पहिलो खेलमै आयोजक तथा साविक विजेता माल्दिभ्सविरुद्ध सानदार जित र दोस्रो खेलमा श्रीलंकाविरुद्ध रोमाञ्चक विजयीसँगै नेपालले दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ)को पुरुष तर्फको ‘साफ च्याम्पियनसिप’मा बलियो प्रस्तुती देखाएको छ ।
नेपालले सुखद प्रदर्शन गर्दा बलिया मानिएका भारत र माल्दिभ्सले सोचे अनुसारको प्रदर्शन दिन सकेका छैनन् । जसकारण लगातार दुई खेल जितेको नेपालले साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान बनाउने निश्चित छ ।
साफ फुटबलको १३औँ संस्करण माल्दिभ्सको मालेमा जारी रहँदा नेपाल ५ टोली सहभागी ‘सिंगल राउण्ड रोबिन’ लिगको शीर्ष स्थानमा छ । नेपालले दुई खेलबाट शतप्रतिशत ६ अंक जोड्दा ३ खेलबाट ४ अंक जोडेको बंगलादेश, २ खेलबाट ३ अंक जोडेको माल्दिभ्स, २ खेलबाट २ अंक जोडेको भारत र ३ खेलबाट १ अंक श्रीलंकालाई पछि पार्दै शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनल नजिक छ ।
फिफा प्रतिबन्धका कारण पाकिस्तान सहभागी हुन नपाउनु र भुटानले कोरोना कारण देखाउँदै प्रतियोगिताबाट नाम झिक्दा प्रतियोगिता सिंगल राउण्ड रोबिनमा खेलाइएको हो । तालिकाको अग्रपंक्तिमा रहने दुई टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
जहाँ नेपालले आफूलाई बलियो स्थितिमा राखेको छ । अब, प्रतियोगितामा नेपालले दुई खेल खेल्ने छ । यस प्रतियोगिताको सर्वाधिक ७ पटकको च्याम्पियन भारत र १ पटकको विजेता बंगलादेशसँग नेपालले बाँकी खेल खेल्नेछ । बाँकी दुई खेलमा नेपालले ३ अंकमात्रै प्राप्त गरे साफको इतिहासमा पहिलो पटक फाइनल पुग्नेछ । सन् १९९३ बाट साफ गेम हुँदै साफ च्याम्पियनसिपको १३औँ संस्करण आईपुग्दा नेपाल हालसम्म फाइनल पुगेको छैन ।
नेपालले आफ्नो तेस्रो खेलमा भारतसँग खेल्दैछ । २४ असोज (आइतबार)हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति पौन १० बजे सुरु हुनेछ । त्यसअघि साँझ पौने ५ बजे आयोजक माल्दिभ्स र श्रीलंका भिड्नेछन् ।
नेपाल भारतलाई हराउन सके एक खेल अघि नै फाइनल प्रवेश गर्नेछ । यदि बराबरले फाइनल सम्भावना बढ्दा, हारले समेत नेपाललाई कुनै फरक पार्ने छैन । सोहि दिनको पहिलो खेलमा श्रीलंका र माल्दिभ्सबीचको नतिजाले समेत प्रतियोगिता फाइनल समीकरणमा धेरै अर्थ राख्नेछ ।
भारतविरुद्ध हारमा नेपालले २७ असोजमा तालिकको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । सो खेलमा बराबर अथवा जितले नेपाल सीधै फाइनल पुग्नेछ । त्यहि दिन भारत र माल्दिभ्स भने नेपालको खेलको नतिजा कुरिरहेका हुनेछन् ।
यस अघि नेपालले दुबै खेलमा काउन्टर रणनीति अपनाउँदा पहिलो खेलमा माल्दिभ्सलाई १–० र श्रीलंकालाई ३–२ गोल अन्तरले पराजित गर्न सफल भएको थियो ।
नेपालले पहिलो खेलमा बैकल्पिक खेलाडी मनिष डांगीको निर्णायक गोलमा साफको इतिहासमा पहिलो पटक माल्दिभ्सलाई उसैको घरेलु मैदानमा हराएको थियो । दोस्रो खेलमा नेपालले युवा खेलाडीको शसक्त प्रदर्शनमा श्रीलंकाविरुद्ध रोमाञ्चक जित हासिल गर्यो । नेपालको जितमा सुमन लामा, अन्जन विष्ट र आयुष घलानले एक एक गोल गरे ।
तीनै गोल काउन्टरमा सम्भव भएका थिए । सुमन र आयुषको यो राष्ट्रिय टोलीको लागि आधिकारीक पहिलो गोल हो । अन्जनले भने राष्ट्रिय टोलीबाट ४ गोल पुरा गरेका छन् ।
बिश्वकै सबैभन्दा लामो लकडाउन २६२ दिनपछि खुल्दै
सिड्नी। अस्ट्रेलियाको सहर मेलर्वनमा लगाइएको लकडाउन आज रातिदेखि खुल्ने भएको छ। कोभिडको कारण देखाई मेलवर्नमा
विदेशी पर्यटकसहित १२ जना हिमपातले तुम्लिङमै फसे, हेलिकोप्टरमार्फत उद्धारको तयारी
सिमकोट। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित हिल्सा र लिमीको ट्रेकिङमा हिँडेका विदेशी पर्यटकसहित १२ जना बाक्लो हिमपातले
बाढीपहिरो क्षतिको निरीक्षण गर्न आज सुदूरपश्चिम जाँदै प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज बिहीबार कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको निरीक्षणमा जाँदैछन्। उनी
नेपाली फिल्म ‘एक्स नाइन’मा सुनिल शेट्टीले अभिनय गर्ने पक्का
काठमाडौं। बलिउड अभिनेता सुनिल शेट्टीले नेपाली फिल्ममा अभिनय गर्ने भएका छन्। उनले मुकुन्द भट्टको निर्देशनमा
फेसबुकको ‘फेक’ फोटोले बंगलादेशमा हंगामा, मुस्लिम समुदायबाट हिन्दु प्रताडित
दुई साताअघि फेसबुकमा मुस्लिम धर्मको पवित्र ग्रन्थ कुरानलाई अपमानित गर्दै त्यसमाथि एउटा बच्चाले पिसाब फेरिरहेको
च्याम्पियन्स लिगः चेल्सी, युनाइटेड र युभेन्ट्स विजयी
काठमाडौं। युईएफए च्याम्पियन्स लिगका शीर्ष टोली चेल्सी, म्यानचेस्टर युनाइटेड र युभेन्ट्सले जित हात पारेका छन्।
आठ फिटकी यी महिला विश्वकै अग्ली महिला!
अंकारा। टर्कीकी महिला रुमेसा गेल्जी विश्वकै सबैभन्दा अग्ली महिला बनेकी छिन्। उनको उचाई ८ फिट
आज एमाले स्थायी कमिटी बैठक, यी हुन् पाँच एजेण्डा
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बिहीबार बस्दैछ। एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर
५९ मिनेट अगाडि
‘अल्मुताइरी पुनः नेपालको प्रशिक्षक बन्न तयार छन्’
एएफसी यू–२३ फुटबलः तयारी अभाव, कठिन प्रतिद्वन्द्वी
एटलान्टाको युवा टोलीबाट खेल्दै आएका विकास ए डिभिजन लिग खेल्न नेपालमा
२२ घण्टा अगाडि
च्याम्पियन्स लिगः मेस्सीको दुई गोल मद्दतमा पिएसजीको जित
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाल बर्खास्त
सिमानामा चिनियाँ सैनिकविरुद्ध लड्न भारतीय सैनिकलाई करेन्ट त्रिशूल (भिडिओ)
भोलि सार्वजनिक बिदा
गोर्खा अफिसरले भेटाए गल्ती, अक्षय कुमारले मागे माफी
बंगलादेशको दुर्गा पूजामा हिन्दूमाथि हमलाः धार्मिक हिंसा भड्किने चिन्ता
गाडीमा लामो यात्रा गर्दा बान्ता हुन्छ ? यी घरेलु उपाय अप्नाउनुहोस्
२ वर्षs अगाडि